Dota2Gods part (1/3) – REDPlayer
[image by Yakonusuke]
Dota2ထဲက Hero Lore ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ Gods ေတြဆိုတာ ရိွပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ဟီးရိုးေတြ အေပၚမူတည္ျပီး Gods ေတြဟာ စုစုေပါင္း ၃၁ ေယာက္ရိွပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ အဲ့ဒီ Gods ေတြ အေႀကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟီးရိုးေတြ အေႀကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။
Ascendants တွေဆိုတာ လျှို့ဝှက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ ဘာသာစကားကို ပြောကြတဲ့ လူတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ Mercurial (Spectre) တစ်ယောက်ဘဲ သူတို့ အကြောင်းကို သိပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင် အဲ့အဖွဲ့အဝင် ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။
Avilliva ဆိုတာက Skywrath တွေရဲ့ Gods ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Bloody Pinions တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နေထိုင်တာကတော့ Skywrath တွေရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်တဲ့ Ghastly Eyrie မှာ ပါ။ ပတ်သက်နေတဲ့ Hero တွေကတော့ Vengeful Spirit နဲ့ Skywrath Mage ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Belladonna ကတော့ The Three Shades ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမဟာ လူသားတွေရဲ့ သူငယ်အိမ်ကို ကြီးစေပြီး မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို မြင်နိုင်စေမဲ့ အစွမ်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဟီးရိုးတွေကတော့ Templar Assassin နဲ့ Bane ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
4. Brewmaster’s Father
Brewmaster’s Father ကတော့ နာမည်မသိရတဲ့ Celestial တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သာမာန် လူသားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းဖက်ပြီး Mangix ကို မွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ Elemental Power တွေကို သူ့သားကို လက်ဆင့်ကမ်း အမွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
5. Burning Celestial
Burning Celestial ကတော့ မြောက်မြားစွာသော Celestials တွေကထဲ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Xin ရဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို သဘောကျခဲ့တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Xin ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Fortress of Flares ကိုဝင်ရောက်ကာ Xin ရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကို လောင်ကျွမ်းရာကနေ ထွက်လာတဲ့ အရိုးပြာတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းပြီး Ember Spirit ကို မွေးဖွါးစေခဲ့ပါတယ်။
Celestials တွေဟာ Dota2 World ထဲမှာရှိတယ် Gods အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သက်ရှိတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မျိုးပွါးခြင်းထိပါ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို သူတို့မှာရှိတဲ့ Element တွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးခွဲခြားကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Fire , Earth , နဲ့ Lightning တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Clasz နေထိုင်တဲ့ Realm ကို အကြောင်းပြုပြီး အဲ့ဒီနေရာကို Claszureme Realm လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ကို Infinities ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Hero ကတော့ Faceless Void ပါ။
8. Dark Ones
Dark Ones ဟာ နာမည်မသိရတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Slark ဟာ သူတို့နဲ့ စာချုပ် ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး စာချုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုတော့ မသိရပါဘူး။
9. Faceless Ones
Faceless Ones ဟာ ဘယ်အချိန်ကတည်းရှိခဲ့မှန်းမသိခဲ့ပေမဲ့ သူ့ကို ကိုးကွယ်တဲ့သူကတော့ Juggernaut ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
10. Flayed Twins
Flayed Twins ကို Flayed Ones ဒါမှ မဟုတ် The Flayers လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ နတ်ဘုရား မောင်နှမဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်ဖို့အတွက် မြောက်မြားစွာသော သွေးတွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လုံလောက်တဲ့ သွေးပမဏ မရရှိရင် Xhacatocati တောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ အဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ သူတွေဆီက သွေးတွေကို စုပ်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ The Flayed Twins ဟာ မပျက်စီးနိုင်သလို တစ်ခြား Realm ဆီကိုလည်း ထွက်မပြေးနိုင်ပါဘူး။ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Hero ကတော့ Bloodseeker ဖြစ်ပါတယ်။